Asia I Vietnam Ho Chi Minh City
Inona no tsara indrindra hahazoana an'i Vietnam?
Ny endrika mivelatra amin'i Vietnam no mahatonga ny dia avy any Saigon ho any Hanoi ho lava. Soa ihany, misy fiatoana mahaliana maro eny an-dalana hamotehana ny dia lavitra. Any amin'ny toerana hafa, maro ireo olona misafidy ny hijanona any Nha Trang mandritra ny fotoana fialan-tsasatra, Hue amin'ny kolontsaina sy ny tantara, ary Hoi An ho an'ny toerana mahafinaritra sy ny toerana mahafinaritra.
Tandremo: Mameno haingana ny fialam-boly eo anelanelan'i Saigon sy Hanoi amin'ny fety lehibe toy ny Tet (Janoary na Febroary) sy ny Taombaovao Shinoa - mialoha tsara!
Avy any Saigon mankany Hanoi amin'ny Bus
Ny halavan'ny andro sy ny alina, ny fiara fitateram-bahinin'ny lava dia mitazona ny làlambe eo avaratra sy atsimo. Raha mandeha mora foana ny fiara fitateram-bahoaka, dia manome toerana tsy dia tsara loatra ny toe-java-manahirana, ary tsy ampy torimaso raha oharina amin'ny miditra amin'ny lamasinina.
Buses koa ny safidy mora miadana. Raha toa ka manome tombony izy ireo - maro ireo orinasa mpizahatany no hanangona anao amin'ny hotely ary misy tapakila mora vidy - handany ora maro hiandrasana ny fifamoivoizana mahatsiravina any Vietnam ianao hanangona mpandeha hafa ary hivoaka ny tanàna. Ampio adiny iray na roa isaky ny ora tonga mba hanonerana ny fijanonana sy ny fifamoivoizana.
Ny fiara fitaterana alina dia manana efitra fisakafoanana marindrano ary manavotra anao ny fandaniana mandritra ny alina fiasana. Indrisy, eo anelanelan'ny famoretana ny mpamily sy ny fanatanterahana ny tandroka foana, dia tsy hialan-tsasatra ianao. Satria ireo mpandeha mandehandeha any amin'ny toerana marindrano, ny mponina maro dia tsy azo ihodivirana fa marary amin'ny bus; Maka Dramamine na manandrana ginger raha toa ianao ka mora vaky.
Tsy dia kely loatra ny boka ary fohy loatra ny ankamaroan'ny olona avo lenta.
Azonao atao ny mamandrika bisy amin'ny fizahan-tany any amin'ny hotely misy anao na any amin'ny biraon'ny sampan-draharahan'ny mpizaha tany - misy maro ao amin'ny faritra Pham Ngu Lao ao Saigon. Mandeha mivantana any amin'ny birao fiara fitaterana bus ianao dia afaka manavotra anao ny kaomiona aloa amin'ny famandrihana.
Fanamarihana: Ny halatra dia olana amin'ny alàlan'ny bisy . Mitandrema amin'ny finday sy MP3 mpilalao izay mety hanjavona rehefa resin-tory.
Cost: $ (ambany)
Fotoana: ★ (miadana)
Fampiononana: ★ (ambany)
Fialam-boly: ★ ★ ★ (avo)
Sary: ★ (medium)
Raiso ny bisy raha tsy mila manangom-bola ianao na maniry ny halehiben'ny fandeferana sy ny fahafaha-manao. Aza manantena ny hatory be loatra amin'ny buses amin'ny alina!
From Saigon to Hanoi by Train
Ny fomba mahazatra indrindra hahitana an'i Vietnam raha mihetsika eo anelanelan'ny toerana dia amin'ny làlamby. Ny fiaran-dalamby amin'ny rivotra dia mampiseho akanjo sy ranomandry, saingy mahasalama izy ireo. Azonao atao ny mametraka sakafo an-jaridaina any amin'ny efitranonao na manararaotra karazan-tsakafo. Ny fiampitana an'i Saigon ka hatrany Hanoi amin'ny lamasinina tsy misy fiatoana dia mitaky ora 33 eo ho eo mba handrakofana ny lamasinina 1 566 miorina amin'ny lamasinina. Raha te-hitsidika an'i Hoi An teny an-dalana ianao, dia mila miala ao amin'ny lamasinina ao Da Nang ianao ary mandeha eo amin'ny 18 kilaometatra any atsimo amin'ny bus na fiara tsy miankina.
Ny fiarandalamby travers dia tonga amin'ny karazana 'sarotra' sy 'malefaka'. Ireo fiara matory mafy - ny lafo kokoa amin'ireo safidy roa - dia manana seza enina, midika izany fa mety ho sandwiched eo amin'ny olona matory eto ambany sy ambany ianao. Ny fiara malaindry mozika dia lafo vidy kokoa nefa manana olona efatra fotsiny ao amin'ny efitrano tsirairay.
Mijanona ho anao ny valizy. Fitaovana tsotra no omena. Ny tapakila fiaran-dalamby mora kokoa, "seza mena", dia manome anao seza am-patana ao anaty fiara mihodina. Na dia tsy mahavariana aza ny fiaran-dalamby marefo dia safidy tsara indrindra ho an'ny torimaso mandritra ny dia lavitra.
Azonao atao ny mividy tapakila sakafo amin'ny fiarandalamby izay mandrakitra ny sakafo napetraka mivantana eo amin'ny efitranonao. Azonao atao koa ny mividy zava-pisotro misy alikaola avy amin'ny sarety. Ny rano mangatsiaka dia azo atao amin'ny tapany mba hahatonga ny dite, ny kafe, na ny lava-paty.
Raha toa ka mandrindra tapakila ho an'ny komisiona ny serivisy mpizahatany sy hotely, ny safidy azo antoka dia ny mamandrika andro maromaro mialoha ao amin'ny gara. Betsaka no maka ny saran-dalan'ireo mpivarotra izay mahafantatra fa miandry ny ora farany ny mpizahatany mba hamandrika.
Ny sasany amin'ireo mpitsoa-ponenana tsy dia lavitra dia fantatra tamin'ny fivarotana tapakilam-piarandalamby henjana ho an'ny vidiny mora. Tsy ho vitanao ny hifanandrina amin'izy ireo raha vao miditra ny fiarandalamby ianao ary mahita fa voavono ianao!
Cost: $ $ (mai)
Fotoana: ★ (medium)
Fampiononana: ★ ★ (midina)
Fialam-boly: ★ ★ (medium)
Fampahafantarana: ★ ★ ★ (avo)
Raha mbola misy safidy manjavozavo, dia ny fiaran-dalamby no fomba mahatalanjona indrindra hahitana faritra sasany ao ambanivohitr'i Vietnam izay tsy azo ekena ho an'ny mpizaha tany. Ho tonga ihany koa ianao hitsahatra.
From Saigon to Hanoi by Flight
Raha toa ianao ka efa ela, dia ny fiaramanidina no safidy haingana indrindra azonao avy any Saigon ka hatrany Hanoi. Rehefa mivoaka mialoha ny birao, dia latsaky ny US $ 100 ny sidina roa ora. Ny Jetstar dia matetika ny mpivarotra mora indrindra eo amin'ny tanàna roa.
Cost: $ $ $ (ambony)
Fotoana: ★ ★ (vit)
Comfort: ★ ★ ★ (avo)
Fialam-boly: ★ (ambany)
Sary: ★ (ambany)
Ny fiaramanidina dia mazava tsara ny safidy azo ampiasaina amin'ny fampitodika lalana mandritra ny 30 ora ao anatin'ny hopitaly roa, fa aza manantena hahita betsaka eny an-dàlana.
Cu Chi Tunnels - Fahatsiarovana ny ady tany Vietnam teo akaikin'i Saigon
Fanadihadiana ny Pham Ngu Lao ao Saigon
Inona no tokony hatao ao Ho Chi Minh City (Saigon)
Palace of Independence: Saigon, Vinanin'ny Tantara Vietnam
Amin'ny famerenana: Clover, Bistro gourmet iray any Paris izay tsy handrava ny Banky
Fitsidihan'ny mpitsidika ny Reichstag any Berlin
Torohevitra amin'ny fividianana RV miaraka amin'ny fitehirizana tsara ny zavatra ilainao
Ny Fiverenan'ny Angon 'i Hinckley
Ny tsara indrindra amin'ny hetsika ara-panafihana tsara indrindra any Etazonia
Mandra-pahoviana no tokony handraisako ny lalao Inca?
SS Norvège - Club Cruise Ship Profile
Sakafo an-dalambe ao Gurney Drive ao Penang
Aoka ho malina rehefa mitsidika firenena malaza ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao
Park Springs Hot Springs, Arkansas
Ireo toerana tsara indrindra 7 tsara indrindra any Dublin
Toeram-ponenana Garden - Ny làlana faran'ny herinandro mankany Grande-Bretagne
Aza atao ireo fahadisoana 8 ireo any Toronto